Dahalo ambony sy ambany latabatra… | NewsMada
Dahalo ambony sy ambany latabatra…
Par Taratra sur 03/06/2019
Niaiky ny eo anivon’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika malagasy fa misy ny dahalo ambony latabatra. Anisan’ny mahasarotra sy mahamafy ny ady amin’ny fampanjakana ny fandriampahalemana izay? Matanjaka be ny dahalo ambony latabatra, misy tambajotra saika amin’ny sehatra sy ambaratonga samihafa: mifampiaro, mifanafin-keloka…
Tsy iza na tsy aiza izay hoe dahalo ambony latabatra izay fa ireo mihevi-tena ho ambonin’ny lalàna? Lehibe tsy meloka na tsy mba diso hatrany, tsimatimanota. Raha tsy izany, tsy maty, hono, raha tsy misy mamosavy. Tsy maty amin’ny ataony na tsy maty amin’izao izany, fa tsy maintsy noho ny tsy fitiavana azy manokana amin’ny ankasomparana.
Matoa velona sy matanjaka izy ireo hatramin’izay: misy miray tsikombakomba ratsy aminy ao, miaro sy mampiasa azy, mahazo tombontsoa manokana amin’ny fanaovan-dratsy amin’izany… Misy manangana fanjakana kely ao anaty Fanjakana? Mitsoka ny mafana sy ny mangatsiaka eo amin’ny faritra misy azy, na eo amin’ny firenena aza.
Dahalo taratasy ny hoe dahalo ambony latabatra: mampiady taratasy amin’ny filalaovana lalàna, ohatra, na mampiasa olona amin’ny fanaovan-dratsy amin’ny fandikan-dalàna. Tsy vitan’izany, eo koa ny hoe mahitahita na mahalala olona: malalaka amin’izay ataony rehetra, fa tsy tan-dalàna na tsy miraharaha fanjakana; eny, na inona na inona, na iza na iza.
Inona avokoa izany rehetra izany? Ireo hoe dahalo ambony latabatra, fa ambany latabatra no tena marina: miasa na mampiasa olona any amin’ny maizimaizina sy mangingina. Nefa manjakazaka amin’ny fomba maloto sy tsy ara-dalàna amin’ny tany, harem-pirenena, harena an-dranomasina, zavaboahary arovana… Tsy amin’ny halatra omby ihany izany.
Tsy amin’ny tontolo ambanivohitra noho ny asan-dahalo amin’ny halatra omby ihany tsinona no hoe mila fandriampahalemana, fa ny sehatra rehetra: ny famokarana tsy hisy hanao am-pihimamba, ohatra, ny vidim-piainana tsy hampitsanga-mitoetra lava, ny hoavy mba hananana fahatokisana sy fanantenana… Tena hisy ny fanovana amin’izay ezaka atao?